Junior Analyst (Credit Risk Department) | Yoma Bank
Junior Analyst (Credit Risk Department)
- ရိုးမဘဏ်၏ ချေးငွေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ၊မရှိ စီမံခန့်ခွဲ သုံးသပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအရာရှိသို့ အချိန်မီတင်ပြနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
- ဘဏ်ခွဲမှတင်ပြလာသော ချေးငွေအမှုတွဲအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ စိစစ်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များအား ဘဏ်ခွဲသို့တောင်းခံခြင်း၊ ချေးငွေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးသုံးသပ်ခြင်း။
- ချေးငွေလျောက်ထားသူ၏ အခြားဘဏ်ချေးငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများနှင့် Financial Statement များစိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ICR, DCR နှင့် အခြား Ration များတွက်ချက်ခြင်း၊ Financial Statement နှင့် Inspection Report တွင်ကွဲလွဲချက်များအား လေ့လာသုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ချက်များကို စုံစမ်းစိစစ်ခြင်း။
- အာမခံမြေနှင့် အဆောက်အဦအတွက် ရာဖြတ်ထားသော တန်ဘိုးများအား Stress Test တွက်ချက်ခြင်း၊ ရာဖြတ်တန်ဖိုးများ သင့်/မသင့် Land Price Data တွင် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြားပြင်ပသတင်းအရင်းမြစ်များမှ လေ့လာစုံစမ်းပြီး အကဲဖြတ်ခြင်း။
- ချေးငွေစိစစ်ရာတွင် ထပ်မံသိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များရှိပါက ဘဏ်ခွဲသို့မေးမြန်းခြင်းနှင့် ချေးငွေအမှုတွဲတစ်ခု ပြည့်စုံစေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုအပ်ချက်အလုံးစုံအားတာဝန်ယူပြင်ဆင်ခြင်း။
- CRD ၏ Loan Application Tracking File နှင့် Computerised System တွင် ချေးငွေဖိုင်များ၏ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိစစ်ဆေး၍ အချက်အလက်များမှားယွင်းဖော်ပြထားပါက သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ခွဲသို့ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးရန် အကြောင်းကြားခြင်း၊ CRD အနေဖြင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များအား ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း။
- Fusion Banking Essence (FBE) Core Banking System တွင် Loan Origination Module မှတဆင့် လျှောက်ထားသည့် ချေးငွေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ချေးငွေအမှုတွဲပါ အချက်အလက်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ချေးငွေစာရင်းအား FBE တွင် Loan Set Up ဖြစ်သည်အထိ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- အခါအားလျော်စွာ ဌာနတာဝန်ခံ၊ ဒုတိယတာဝန်ခံနှင့် မန်နေဂျာများမှ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(က)	လူအများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်ပြီး ဘဏ်ခွဲများ၊ သက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အချိန်မှီပြီးစီးနိုင်ရမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ဂရုပြုနိုင်ရမည်။ တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။
(ဃ) စာအရေးအသားနှင့် စကားပြောကောင်းမွန်ရမည်။
(င) အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်၍ အချိန်နှင့် တပြေးညီ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု ကောင်းမွန်ရမည်။
(စ)	အရေးကြီးသော၊ အဓိကဖြစ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များအား သိရှိနားလည်နိုင်ရမည်။
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
LCCI Level II, III (သို့) စီးပွားရေး Diploma တစ်ခုခု ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
(ခ)	Advanced Microsoft Word, Microsoft Excel နှင့် E-mail အသုံးပြုနိုင်ပြီး မြန်မာစာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်စွာရိုက်နိုင်ရမည်။
(က)	မိမိလျှောက်ထားသောရာထူးနှင့် ကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ် ရှိရမည်။
Accountant PLAINSAILING INTERNATIONAL LOGISTICS & TRADING CO Supervisor (Accountant) Oriental Leasing Co.,Ltd. Collection Assistant ZTE Myanmar Company Limited Assistant Accountant Sales Ledger METRO Wholesale Myanmar Ltd Risk Specialist Industry Leading Company Junior Auditor Fortune International Limited Finance Supervisor ITM Group of Companies Cashier ( Thilawa Site ) Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd. Accountant AdvaMed Medical Innovation Co., Ltd. Junior Accountant Golden Environmental Construction & Development Accountant Global Yangon School Finance And Accounting Office ( Telecommunication) Magenta Consulting Services